Momba anay - RJ Machinery CO., Ltd.
Ny orinasa dia ahitana ny 5 departemanta, Sales, R & D, Q & C, Production sy ny departemanta Finance. Mafy R & D departemanta, isan-taona, dia hitarika mandritra ny fanadinana sy hanatsarana ny vokatra.
Noho ny ezaka ny ekipa, dia hihazona ny Output amin'ny avo lenta, ny kalitaon'ny iray amin'ireo tsara indrindra maneran-tany. Ankehitriny dia efa tonga ny rivotra fanitarana lavaka lehibe indrindra ao Shina mpamatsy.
Changzhou Rongjiu milina Co., Ltd dia naorina teo an 2011, ary ankehitriny dia manana ny marika roa Rongjiu sy AOKS. Ny orinasa dia mifantoka indrindra indrindra amin'ny famolavolana, fanamboarana sy ny fivarotana ny vokatra toy ny rojo
nitendry rivotra fanitarana zana, kapila tanimanga karazana rivotra fanitarana zana-nitranga manan-danja rivotra fanitarana karazana zana, ny fiarovana vy fitoeran-tongotra ny rivotra fanitarana napetraka sy ny sisa.
Rehefa afaka taona vitsivitsy ny fampandrosoana, ny orinasa iray izao manana mihoatra ny 3000 metatra toradroa fototra, miaraka amin'ny nafarana fanodinana foibe, CNC lathes, cylindrical Fitotoana Vary milina tsy mitovy habe sy ny asa fanamboarana equipments.Then ny orinasa ankehitriny no lasa mpitarika ny orinasa sy ny fanao isan-taona Output sanda nahatratra efa ho 10 tapitrisa. Inona no kokoa ny orinasa manao ezaka maharitra hanatitra ny antonony sy siantifika kokoa fanatsarana ny rafitra anatiny ary koa ny fomba fanamboarana ny vokatra, ka mahatonga azy ireo mateza kokoa, azo ianteherana sy mafy orina. Tamin'ny ankehitriny ny orinasa dia nanao trano ho marika sy ny fampiroboroboana, ary amin'ny fanomezana mikendry mpanjifa ny vokatra faran'izay tsara mba hihaona ny zavatra ilainy manokana.
Manao ny fampanantenana mba hanolotra kilasy voalohany kalitao koa mahomby sy avo lenta asa, mba hihazonana ny heriny ny orinasa. Izahay manohana ny fitsipiky ny olona mirona, ary handresy amin 'ny fahombiazana amin'ny alalan'ny miady koa. Izany ihany koa ny fanantenana lehibe fa afaka manome fahafaham-po ny mpanjifa rehetra, hahazo fandresena-fandreseny ny fiaraha-miasa sy miara-miasa amin'ny olona avy amin'ny fari-piainana rehetra mba hamoronana ampitso tsaratsara kokoa!
AOKS & R.J. Miatrika ANDTEX201 ny milina ...
Orinasa vaovao an'ny sampana: Chengli Precision Equ ...
Rongjiu Machine mandeha manatrika ny faha-18 ao Shangh ...